ဘာသာ၇ပ် ၄ ခုလေ့လာခြင်း | မျိုးမြန်မာ
ဘာသာ၇ပ် ၄ ခုလေ့လာခြင်း
Posted by myomyanmar on April 18, 2014
Posted in: ဘာသာရေး.	Tagged: ဘာသာရေး.	Leaveacomment
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာကြီး ၄ ခုကိုသိပ္ပံ၇ှင်ကြီးများအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလုံးဝရှိခဲ့ကြောင်းမှန်ကန်
ကြောင်းနှင့်ကျန်ဘာသာများအားလုံးလက်ခံအသိမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ပါသည် လက်ရှိကျန်နေခဲ့ သော ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများစစ်ဆေးစမ်းသပ်ကြည့်သောအခါ သာမန်စွယ်တော်နဲ့မတူပဲ တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်
ထင်ရှားရှားလည်းရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာသိအောင်မကြေငြာလည်းလို့မေးခွန်းတွေမေးစ၇ာရှိတယ် မြတ်ဗုဒ္ဓရှိခဲ့ကြောင်းမှန်ကန်
၁/ပဋိသန္ဓယူသောနေ့ ၆၇ ခုဝါဆိုလ
၂/ဖွားမြင်သောနေ့ ၆၈ ခုကဆုန်လ
၃/တောထွက်သောနေ့ ၉၇ ခုဝါဆို
၄/ဘု၇ားဖြစ်သောနေ့ ၁၀၃ ခု
၆/ပ၇ိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သောနေ့ ၁၄၈ ခု
ခဲ့တာပါ…..မြတ်စွာဘု၇ားဘု၇ားမဖြစ်မီဘ၀ပေါင်းများစွာကလည်းသူ့အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ခဲ့သောသမိုင်းကြောင်း ဇာတ်တော်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ဒါကြောင့်ကျတော်တို့တထွေမြင့်မြတ်လှတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုဆုံလာ၇တာကံ
၇လေအောင်အားလုံးမှာတာဝန်၇ှိပါတယ် အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောပ၇ိပက္ခများကို ဆ၇ာတော်ကြီးများအားကြိုတင်သိထားသဖြင့်
အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်ဥပဒေပေါ်ပေါက်စေ၇န်ကျိုးစားတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကတကယ်ဆိုအားတက်စွာ
နဲ့ကြိုဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းဆောင်၇ွက်သင့်ပါတယ် …အခုကသူတမျိုးကိုတမျိုးအဖွဲ့တွေကွဲ အမြင်တွေကွဲလိုက်ကြတာ မြန်မာတွေ..၇န်သူကိုပေါ့ပေါ့
လူမျိုးမှန်လျှင်အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်ကူညီပါ…သင်မကူညီ၇င်လည်း၇တယ်ဒါပေမဲ့ ကူညီသူအတွက်အနောက်ယှက်မပေးနဲ့
နိုင်သလဲ ဘု၇ားကိုကဖန်ဆင်းရှင်ပါ ကမ္ဘာမှာဖန်ဆင်း၇င်သာတူညီမျှဖန်ဆင်းပါလား လှ၇င်တကမ္ဘာလုံးလှချမ်းသာ၇င်တစ်ကမ္ဘာလုံးချမ်း
သာ တာမှဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်မှာပေါ့တချို့လူတွေကဘယ်လိုဖန်ဆင်းပါသလဲ အသားကမဲပြီးအ၇ုပ်ကညံ့အနားနေမိ၇င်တောင်သူတို့အနံ့ကမ
← ဖန်းဆင်းရှင် စစ်တမ်း
ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ဘယ်ဘာသာမှာရှိလဲ ? →